Obere Sandblaster, Akụrụngwa na-agba aja aja, Igwe gbawara - Ngwa ngwa ngwa
Bench n'elu sandblast kabinet ...
Centrifugal gbọmgbọm Finishing Machine 30L 60L 80 ...
Ọrụ: The ...
Hand ẹkenịmde Sandblasting Gun Portable Pneumatic A ...
Anti-nchara Protection Air Sp ...
2021 New type Automatic drum ụdị sandblasting ...
Automatic sandblasting mach ...
Ebu belt akpaka Sand ọgbụgba ọkụ Equipment ...
Eriri eriri na ọgbụgba ọkụ ...
Plastic Mass ishingmecha Deburring polishing Media
Plastic Mass ishingmecha Debu ...
B4C Venturi Boron Carbide Nozzles Nnukwu Coro ...
Njirimara nke ...
Igwe na-ebibi Vibrabtory na mkpuchi
Vibratory tumbler na cove ...
Omenala Water Aja ọgbụgba ọkụ Wheel ọgbụgba ọkụ
Okwu Mmalite: ...
Tungsten Carbide Sandblast nozulu High Pressure ...
Mmiri ụdị akọrọ Aja ọgbụgba ọkụ igwe na Tur ...
Mmiri ụdị akọrọ sandblasti ...
Sandblast okpu agha na iyo okpomọkụ okpomọkụ njikwa
Water abrasive Nrụgide ọrụ aja ọgbụgba ọkụ igwe ...
Etinyere scal ...
Electrostatic ntụ ntụ mkpuchi Machine
Electrostatic ịgba igwe ...
Portable Sandblasting Guns 90psi Kemeghi Sma ...
Nkọwapụta: Ngwaahịa siz ...
Hangzhou Shunjie Machinery Technology Co., Ltd bụ (N'oge gara aga Hangzhou Huashengtong Machinery Equipment co., LTD.)
bụ ọkachamara mmepụta na ahịa nke ọgbụgba ọkụ igwe, shot ọgbụgba ọkụ igwe, shot peening igwe, ọgbụgba ọkụ ụlọ,
ọgbụgba ọkụ abrasive na ndị ọzọ na elu ọgwụgwọ akụrụngwa nke onwe enterprise, na-akwado kpọmkwem ahịa nke niile di iche iche nke akụkụ ahụ mapụtara, mfe mebiri emebi onunu;
N'otu oge ahụ maka imirikiti ndị ahịa na-akwado iji nye ngwaahịa dị elu nke ụlọ na ndị si mba ọzọ ịghasa ikuku.
Anyị na ngwaahịa na-exported karịrị iri mba na mpaghara na Middle East, Australia, Canada, Russia, Europe na United States.
Junjie n'ịgbaso "otutu echiche, ịchụso mma, ngwangwa mma, adigide management" azụmahịa nkà ihe ọmụma; Na “mma bụ ọrụ mbụ”,
ahịa afọ ojuju bụ anyị nsọpụrụ ”dị ka anyị na-adịgide adịgide àgwà amụma; Iji lekọta gburugburu ebe obibi, laghachi na ọha mmadụ,
ilekọta ndị ọrụ na ọrụ ndị ọzọ metụtara ọha dịka nke ha; Inweta "iguzosi ike n'ezi ihe, ibu ọrụ, ọhụrụ, otu" dị ka anyị mgbe niile na-achụ na ihe mgbaru ọsọ, anyị na-atụ na-enye gị àgwà ngwaahịa na ọrụ!
A na-ejikarị ya n'ụgbọ mmiri, ngwongwo ígwè, ihe nkedo, ụgbọala, akụkụ akpaaka, kposara, ngwa ngwa dị iche iche, marble, akara, ịkpụcha okwute, igbe nche, plastic, kristal, iko,
seramiki na jeans abrasive na ulo oru ndi ozo, anyi nwere ndi okacha amara, imeputa ihe, ntinye na ntinye na oru zuru oke mgbe erechara.
Junjie usoro ngwaahịa mechaa ISO-9001: 2008 mba quality usoro asambodo, na nwere ihe karịrị 40 nchọpụta Kemịkalụ,
ya ngwaahịa na-mmekọrịta na European na American ahịa. The ụlọ ọrụ nwere magburu onwe injinịa na oru pesonel,
yana ndị ọrụ injinia a zụrụ azụ nke ọma, oge ọ bụla na ebe ọ bụla iji nye ndị ọrụ ndụmọdụ ndụmọdụ, ndụmọdụ ntinye,
ndozi na ọrụ ndị ọzọ. Sandblasting igwe, sandblasting ụlọ na ọtụtụ-eji ụgbọala, akwa, chemical eriri, na nkà mmụta ọgwụ, nri,
metallurgy, agha, ngwaahịa eletriki, igwe, ngwaike na nchekwa gburugburu ebe obibi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Abụọ / 02/2021
Jenụwarị / 19/2021
Mkpebi / 28/2020
Nọvemba / 21/2020